धादिङबाट हिँडेर काठमाडौं आउन लागेका दुई युवा पक्राउ, कारण अर्कै छ – List Khabar
Home / समाचार / धादिङबाट हिँडेर काठमाडौं आउन लागेका दुई युवा पक्राउ, कारण अर्कै छ
धादिङबाट हिँडेर काठमाडौं आउन लागेका दुई युवा पक्राउ, कारण अर्कै छ
admin January 20, 2022 समाचार Leaveacomment 72 Views
काठमाडौँ, ५ माघ । अवैध लागुऔषध गाँजाको धुलो ‘पोल्याण्ड’ सहित दुईजनालाई प्रहरीले नागढुंगाबाट पक्राउ गरेको छ । माघ ३ मा धादिङको थाक्रे गाउँपालिका घर भएका २३ वर्षीय बिकाश लामा र मकवानपुर घर भएका २७ वर्षीय गणेश लामालाई पक्राउ परेका हुन् ।
धादिङतिरबाट पैदल हिँडेर काठमाडौं प्रवेश गर्न लागेका उनीहरुको साथबाट ९ सय ४० ग्राम गाँजाको धुलो (पोल्याण्ड) बरामद गरिएको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी दिनेशराज मैनालीले बताए । उनिहरु बिरुद्ध लागुऔषध नियन्त्रण ऐन अनुसार महानगरीय प्रहरी वृत्त थानकोटले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
यस्तै, दाङ घोराहीका विकास पुनलाई प्रहरीले काठमाडौँबाट मंगलबार दाङ ल्याइपुर्‍याएको छ । जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी सुरेश काफ्लेले पुनलाई जिल्ला ल्याइ कानुनी प्रक्रिया अनुसार अगाडी बढाएको बताए । कारसहित राजधानीको सुनधारा क्षेत्रबाट पक्राउ परेका पुनलाई उनकै कारबाट प्रहरीले जिल्ला ल्याएको हो ।
कपिलवस्तु जिल्लाको बाणगंगा ४ का तिलक थापाले दिएको ठगी मुद्दाको जाहेरीका आधारमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पुनलाई सोमबार काठमाडौँमा पक्राउ गरेको थियो ।
घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १५ का पुनका विरुद्ध कपिलवस्तुका थापाले ४९ लाख ५० हजार ठगी गरेको भन्दै उजुरी दिएका छन् । त्यही जाहेरीका आधारमा पुन पक्राउ परेका हुन् ।
Previous ओ’मिक्रोन संक्रमित भए के गर्ने ? यस्ता छन् डा.रवीन्द्र पाण्डेका १० सुझाव !
Next रा’ती सुत्ने स’मयमा यस ठाउँमा द’ल्नुहोस् काँ’चो आलु मिल्नेछ नसोचेको फा’इदा